News - know maara n'ezie ihe eji arụ ọrụ ụgbọ ala
1.What bụ ihe eji arụ ọrụ ụgbọ ala abụọ?
Ejiri ihe eji eme ihe eji eme ihe site na mmeghari isi. Ọ na-atụgharị n'elu spindle dị n'etiti, spindle a na-agbagharị gburugburu eccentric offset. Ezigbo ihe atụ maka ihe eji eme ihe eji eme ihe bụ gburugburu ụwa. Itselfwa n’onwe ya na-agba gburugburu nakwa na ọ na-agba anyanwụ gburugburu. Onye na-eme ihe eji eme ihe abụọ na-eme ka ọ dị ọcha, na-eme ka ọ dị ọcha, ma na-eme ka ọ dị ka nke aka mmadụ-naanị na oke ọsọ mmadụ! Nsonaazụ bụ igwe nke kwụsiri ike kpamkpam, na-enweghị ọchịchọ "ịgbanahụ" onye ọrụ ahụ. Ọrụ dị mma, nke yiri aka na-echebe mbibi elu.
2.Gịnị mere ịhọrọ ndị Polishers Car abụọ?
Ndị na-eme polis na-eme ihe abụọ ga-eme ka ederede na mma nke agba agba na-enweghị ihe egwu ọ bụla. Ha bụ nhọrọ ndị enyi kachasị nwee mmekọrịta maka ndị mbido na ndị ọkachamara, ha na-arụpụtakarị nsonaazụ mara mma. Ha nwere ike iwetara gị obi ụtọ mgbe ị na-akọwa ya, ma nyere gị aka ịchekwa oge na ego. D / A Polisher bụ igwe dị iche iche. Enwere ike iji ya maka nhicha, nchacha, na itinye waxs, na-emecha ya na ọsọ dị iche.
3.Olee ka ndi Polishers na-aru oru eji aru oru?
Dual Action Polisher na-agba gburugburu na mpe mpe akwa gburugburu etiti spindle ebe mpe mpe akwa kpamkpam spins na ya axis.
A counterweight n'akụkụ nke ọzọ nke etiti spindle dampens vibration maka ezigbo ọrụ. Isi ihe akụrụngwa a na-akpọ orbital na-egbochi ịmepụta hologram (akara akara akara), agba agba, na ụdị mmebi nke agba ndị ọzọ na-ejikọkarị na polis na-agba ọsọ ọsọ na igwe eji echekwa. Dual Action Polisher na-ewepụ ohere nke mmebi agba. Ha dị ezigbo enyi maka ndị ọrụ.